Zambia vs Zimbabwe Football Friendly Match (ZAM-1; ZIM-3) - News World
You are here: Home / Sports / Zambia vs Zimbabwe Football Friendly Match (ZAM-1; ZIM-3)
Zambia vs Zimbabwe Football Friendly Match (ZAM-1; ZIM-3)
Zambia vs Zimbabwe International Friendly: The International Friendly match between Zambia and Zimbabwe is going to held today at 6:30 PM IST. People can watch and enjoy the live match on TV Channels which telecast Zambia vs Zimbabwe Friendly match.
Previously these two teams Zambia and Zimbabwe faced three times each other. Two times in International Friendly match in which one match ended in a draw and other match won by Zimbabwe and one more time in African Nations Cup in which Zambia won the match. In this match, it is predicted that Zimbabwe will win the game against Zambia.
In the last five matches of Zambia, they won three matches against Tanzania, Botswana and South Africa, another ended in a draw with Gabon and another match lost against Mozambique. In the last five matches of Zimbabwe, they won four matches against Lesotho, Swaziland, Seychelles and Mozambique and another match ended in a draw with Madagascar.
Check Live Goal Updates of Zambia vs Zimbabwe Here
Stay tuned for live goal updates of the International Friendly match Zambia vs Zimbabwe on this website.
Filed Under: Football, Sports Tagged With: Zambia vs Zimbabwe